HomeArimaha QoyskaJacaylku Qadar Miyaa Mise Waa Go,aan?
Jacaylku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah Aadamaha, waana Baahi muhiim ah oo uu dadku u baahanyahay waana dhaqan lagu helo saamayn iyo soo jiidasho,
taas oo ah mid ka mid ah ujeeddooyinka iyo baahiyaha uu qofku u qabo soo jiidashada qofka uu jecelyahay.
Jacaylku waa is dhex gal qurux badan oo ka dhexeeya Wiil iyo Gabadh waliba dareen dabiici ah oo lagu gaadho u jeedo kuna xidhan is faham iyo wada sheegaysi dhex mara Wiil iyo Gabadh waana mid abuura farxad labada qof ah.
Hadaba Jacaylku Qadar Miyaa Mise Waa Go,aan?
Diinta Islaam-ka ayaa inoo sheegaysa in wax walba oo jooga adduunka ku xukuman yahay Xukunka Eebbe Iyo Waliba Awoodiisa waliba kaliya illahay ogyahay taasna waxa cadayn u ah in ay addoomuhu qabtaan sida Dhaq-dhaqaaqooda, Fikirkooda, Doorashadooda iyo wax walba oo ay qabanayaan hadii ay tahay shar iyo Khayrba waxana uu ilaahay Ummadiisa u sameeyay xuduud ama wado ayna dhaafi Karin waliba u lahayn awood ay ku dhaafaan.
Waxana intaas sii dheer in wax walba oo uu Aadamuhu doonayo in uu qabto in uu sameeyo tahay wax uu ilaalhay qoray ama ugu tala galay in ay dhaco hadii ay tahay dookhyada Bani aadamka iyo wax walba oo uu samaynayo.
Hadaba waxa aan Aan jacaylka dhigi karnaa halkaas waana mid qadar ah oo uu ilaahay raali ka yahay waliba ah dookh uu ilaahay wado waliba ilaahay Nabiyadii uu u soo diray umada u galiyay jacayl si uu ugu hogaamiyo diinta Islaamka iyo waliba adeecidiisa.
Jacaylka ayaa sidoo kale ah mid uu ilaahay Waalidka u galiyay caruurtooda waana mid qadar ah oo uu illahay wado waliba raali ka yahay waana rabi taan Bani aadam oo uu illaahay adduunkiisa u galiyay wax walba.
Jacaylka ayaa ah Qadar illaahay wado marka loo eego in uu illahay kula kulminayo qofka munaasibka kugu ah, wakhtiga munaasibka kugu ah & goobta munaasibka ah taas oo ay ka dhalanayso farxad dhex mara qalbiga labada qof ee is jecel iyaga oo aan u daalin ama dadaal dheeraad ah u samayn.